XOG:- Qorshihii guddiga doorashada dadban ee hore loo dejiyay oo fashil ku yimid (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Qorshihii guddiga doorashada dadban ee hore loo dejiyay oo fashil ku yimid (AKHRISO)
Warar hoose aynu helnay ayaa sheegaya in dib u dhac uu ku yimid qorshihii guddiga doorashada dadban ee hore loo dejiyay inay ku dhacaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Wuxuu markii hore qorshuhu ahaa in maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha September ay si toos ah u bilawdaan doorashada mudanayaasha Aqalka Sare oo dhamaan agabka doorashada la geeyo caasimadaha maamulada iyo Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa jadwalka doorashada ku caddeyd in 25-ka bishaan oo ah maalinta berrito ay dowlad goboleedyada soo gudbiyaan magacyada liiska u matalaya Aqalka Sare, iyadoo aanu jirin maamul wax talaabo ah ka qaaday dhinacaasi.
Dhinaca kale, warar kale oo la helaayo ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee heer federaalka iyo guddoomiyeyaasha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ay shir ka leeyihiin dib u dhaca ku yimid qorshihii doorashada.
Jadwalkii hore ee guddiga doorashada dadban ayaa ahaa inay u dhacdo sida hoose ku xusan:
U codeynta xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 25-ka September ee 2016-ka.
U codeynta xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay dhaceysaa inta u dhaxeeysa 24-ka September ilaa iyo 10-ka October 2016.
Xubnaha labada Aqal, kan Sare iyo kan Hoose ee baarlamaanka waxaa la dhaarinayaa 20-ka October 2016-ka.
Madaxweynaha waxaa la dooran doonaa 30-ka October, waxaana dooranaya xubnaha labada Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee baarlamaanka, sida uu dhigayo dastuurka federaalka ku-meel-gaarka ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii guddiga doorashada dadban ay soo saareen war-saxaafadeed ay sheegeen in caqabado badan soo wajahay guddiga ay keeni karaan dib u dhac, waxaana haatan muuqata in xaaladda doorashada uu mugdi kale hareeyay.
DIGNIIN:- Fadlan Dhowr Xuquuqda Qoraalka.